के तपाइको पनि उपरखुट्टी लगाएर बस्ने बानी छ ?तपाईंकोलगि हानिकारक हुनसक्छ है ! – News Nepali Dainik
के तपाइको पनि उपरखुट्टी लगाएर बस्ने बानी छ ?तपाईंकोलगि हानिकारक हुनसक्छ है !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २३, २०७७ समय: २३:२८:५७
जबकी वर्तमान समाजमा सभ्यताको कुरा गर्दा हामी त्यही शिष्टचार पालना गर्न बाध्य छौं, जो हिजो हामीले लत्याएका थियौं । हाम्रा पिता-पूर्खाले सिकाएको शिष्टचारलाई हामीले ‘पुरानो सोंच’ भनेर उडाएपनि आज त्यो कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई हेक्का हुँदैछ।
उपरखुट्टी लगाएर बस्नुको हानिकारक प्रभाव शरीरमा पर्छ। हुन त हामी यसलाई स्टाइलको वा आरमको रुपमा लिन्छौं । कतिपय अवस्थामा आफुलाई ठूलो देखाउन पनि हामी उपरखुट्टी लगाउँछौं, तर यो पोजिसन सही होइन ।
भेरिकोज भेन्समा नसा बढेको हुन्छ । कुनैपनि नसा भेरिकोज भेन्स नै हुनसक्छ । तर सबैभन्दा प्रभावित नसा हाम्रो खुट्टा र खुट्टाको पञ्जामा हुन्छ । त्यही कारण उभिदा वा घुम्दा हाम्रो तल्लो भागको नसामा दबाब बढ्छ । भेरिकोज भेन्स सामान्यत छालाको सतहमा देखिने निलो नसा हो । कहिले काहीँ यसले गंभिर समस्याको रुप लिन्छ।
Last Updated on: February 5th, 2021 at 11:28 pm